Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey Lacagta cusub ee Shillin Soomaaliga ah . – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey Lacagta cusub ee Shillin Soomaaliga ah .
By HornAfrik	 On Jun 20, 2018
Hornafrik-Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya, Mudane Bashiir Ciise Cali oo maanta la hadlay Warbaahinta, ayaa ka warbixiyey Lacagta cusub ee Shillin Soomaaliga ah ee dalka loo soo daabacayo iyo hawlaha lagu horumarinayo Bankiga dhexe ee dalka.
Soomaaliland oo xabsiga ka sii deysay Boqor Buurmadow.
Ciidamada amaanka oo Baydhabo ku toogtay qof looga shakisan yahay Al-Shabaab.